Akwụkwọ China PLA kpuchie akwụkwọ nwere ike imebi ihe 100% PLA na -eji maka iko na ọkwá na ndị na -eweta ngwaahịa | Akwụkwọ doro anya
PLA kpuchie akwụkwọ Biodegradable nke ejiri 100% ihe nwere ike imebi PLA na -ejikarị maka iko na ọkwá
Ojiji ： Họrọ ihe ọ drinksụ coldụ oyi ma ọ bụ ọkụ.
Akụrụngwa ： Họrọ PE ma ọ bụ PLA ma ọ bụ akwụkwọ FSC
Njirimara ： Ihe mkpofu ihu ọma gburugburu ebe obibi nwere ike ịbibi
Size Requ Ihe ndị ahịa chọrọ
Agba Color Agba ahaziri
Akara: Lo Akara ahaziri nke ọma
Mbukota: 50pcs*20bags/katọn ma ọ bụ ahaziri ụzọ mbukota
Keywords ngwaahịa paper akwụkwọ na -emebi emebi
Zitere anyị email Budata
Ojiji Họrọ ihe ọ drinksụ coldụ oyi ma ọ bụ ọkụ.
Akụrụngwa Họrọ PE ma ọ bụ PLA ma ọ bụ akwụkwọ FSC
Njirimara Efu Eco enyi na enyi echekwara nwere ike imebi
Nha Ihe ndị ahịa chọrọ
Akara Ahaziri ahaziri nke ọma
Mkpuchi Nhọrọ akwụkwọ mkpuchi, plastic mkpuchi ma ọ bụ enweghị mkpuchi
Keywords ngwaahịa iko nwere ike imebi
Ihe: PE ntekwasa akwụkwọ
Ikike: Anyị nwere ike ịnabata ikike dị iche iche
Obibi: Mbipụta Flexo; ink mmiri na ink ọkwa nri
Jiri: Iko akwụkwọ maka nri ma ọ bụ ihe ọverageụ beụ
Mbukota: Katọn ma ọ bụ ahaziri
Ọrụ OEM: Ee
Ịkwụ ụgwọ T/TL/C wdg.
Port: Nkwupụta Dabere na ihe, nha, agba ebipụta, oke
MOQ 5 tọn
1. Aha ngwaahịa: Akwụkwọ e biri ebi maka iko akwụkwọ mpịakọta ma ọ bụ onye na -akwado akwụkwọ.
2. Ihe: Akwụkwọ ọkwa osisi pulp akwụkwọ nri.
3. Ibu ibu: 170gsm-350gsm nwere mkpuchi PE na ibu dị iche iche.
4. Obosara: 550mm-1200mm.
5. ngwugwu: na mpịakọta/mpempe akwụkwọ/ịcha akwụkwọ iko fan na kechie na pallet.
6. Mbipụta: obibi akwụkwọ Flexo/dechapụ ụgwọ.
7. Ngwa: Ihe maka ime fan cup cup na ala akwụkwọ; Ihe maka ịme efere efere, igbe nri akwụkwọ, igbe ngwugwu; Ihe ngwugwu akwụkwọ nri ndị ọzọ enwere ike iwepụ; Ihe ngwugwu ihe mgbochi mmiri/griiz.
Nke a bụ nha nke nwere ike izute mkpa gị. Gụnyere
6oz - Flat dị ọcha
8oz - Obere ụzọ mbata
10oz - Mgbe niile (emebere maka iji ya n'okpuru igwe akpaaka)
12oz - kọfị mgbe niile
16oz-Nnukwu kọfị ị ga-aga
20oz - buru ibu / kọfị buru ibu
Otu mgbidi Akwụkwọ iko
N'elu*N'ala*Ịdị elu (mm)
APP 210+18 Pee
280+20g Pee (APP)
Nke gara aga: Akwụkwọ Ọpụrụiche Mpempe akwụkwọ Mbipụta Kpuchiri ekpuchi maka onyinye onyinye omenala
Osote: ọkụ na -ere Pe ntekwasa n'elu Food mezuwo mmanụ àmà Akwụkwọ maka iko
100% biodegradable na akwụkwọ compostable
Akwụkwọ agba agba nwere ike imebi
Akwụkwọ mbukota biodegradable
Ihe akpa akwụkwọ
Asọmpi Akwụkwọ Akwụkwọ
Nkwakọ ngwaahịa akwụkwọ biodegradable
Akwụkwọ anụ ahụ nwere ike imebi
Mpempe akwụkwọ anụ ahụ nwere ike imebi
kraft akwụkwọ biodegradable compostable
Iko akwụkwọ nwere ike imebi
Efere akwụkwọ nwere ike imebi
Akwụkwọ Straw Biodegradable
Akwụkwọ Straws Eco Enyi na Enyi nwere ike imebi ihe